Nbudata mbụ na 2022
Site na nkwado nke ngalaba niile, anyị dechara nbudata mbụ na 2022. Kwere na ndị ahịa anyị ga-enweta ma nwee ọmarịcha akpa ahụ n'oge adịghị anya!
Ọ dị mma, anyị laghachiri ọrụ site na ezumike CNY!
Anyị na-alaghachi n'ọrụ site na ezumike CNY, a na-anabata akpa gị emebere!Ogo nke ọma na oge nnyefe ngwa ngwa na-eme ka ị nweta ọtụtụ ahịa na asọmpi!
Ngwunye akpa ikpeazụ tupu ezumike CNY, daalụ maka nkwado ndị ahịa niile, ọ bụrụ na anyị nwere nnukwu afọ ọhụrụ na 2022
Ego ole bụ akpa anaghị kpara akpa?
Ndị ahịa na-abịakarị ịjụ: 'Ole bụ akpa eco-friendly na-adịghị kpara akpa'.Enwere ọtụtụ ihe na-emetụta ọnụ ahịa akpa, gụnyere ihe eji eme akpa ahụ, oke na nha nke akpa ahụ, usoro obibi akwụkwọ, agba nke efere akwụkwọ, ọnụ ọgụgụ nke mbipụta, a...
Gịnị bụ àgwà akpa nkịtị?
Akpa ole ka ị nwere n'ụlọ?Echiche anyị bụ na ị nwere ike ịnwe akpa mgbatị ahụ, akpa osimiri, akpa picnic, akpa izu ụka, akpa ịzụ ahịa, na akpa ebu.Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka, ị nwekwara ike ịnwe nnukwu nwa ma ọ bụ akpa ezinụlọ, n'ihi na mgbe ọ bụla ị na ụmụ gị na-apụ n'ụlọ, ịkwesịrị iweta ọkara nke gị ...
Otu esi elele ogo nke akpa ahaziri iche?Kedu ihe bụ isi ihe?
Site na mmụba na-aga n'ihu nke ọkwa obibi ndụ na oriri ndị mmadụ, ụdị akpa niile aghọwo ngwa dị mkpa na gburugburu ndị mmadụ.Akpa Guangdong bụ otu n'ime ebe a na-emepụta akpa nke bara ọgaranya, ma bụrụ nke a ma ama maka àgwà ọma ha na ụdị ọgaranya.Otu esi elele ihe ahaziri ahazi...
Otu esi ehichaa akpa njem?Kedu ụzọ isi ehicha akpa njem?
Site na mmepe ngwa ngwa nke ọha mmadụ na mmụba nke ụkpụrụ ndụ mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme njem.Njem njem bụ àgwà nke ndụ na ụzọ nke ịda mbà n'obi.Omume ikuku a na-eme ka ndị oge a na-ewere ya dị ka ndụ.Nchekwa nke ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị a na-ejikarị na ...
Otu esi ahọrọ onye nrụpụta akpa azụ azụ omenala?
Site na mmụba nke ụkpụrụ ndụ mmadụ, ọdịmma nke ụlọ ọrụ na-adịwanye mma ma dị mma, a na-enyekwa ndị ọrụ onyinye n'oge ezumike.Ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ akpa azụ ka onyinye ndị ọrụ.Ọ bụghị naanị na enwere ike iji ha dị ka uru ndị ọrụ, mana ụlọ ọrụ lo ...
Ahịa akpa ịchọ mma nke Guangzhou na-etolite ngwa ngwa, ihe a na-achọkwa na-abawanye.Ọganihu nke ụkpụrụ ndụ, ime obodo na ịrị elu nke ụlọ ọrụ ịchọ mma akwalitela mmepe na-aga n'ihu nke ahịa akpa ịchọ mma Guangzhou.Site na ịrị elu nke ahaziri c...
Akpa mara mma nke anaghị kpara akpa siri ike, na-adịgide adịgide, mara mma n'ọdịdị, ọ dị mma na ikuku ikuku, enwere ike iji ya mee ihe, nke a na-asacha, silk na-enyocha maka mgbasa ozi, akara, ma nwee ogologo ndụ ọrụ.Ọ dabara maka ụlọ ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla dị ka mgbasa ozi na onyinye.Guangzhou Tongxing Packaging Co.,...
Otu esi amata ákwà naịlọn
A na-akpọkarị Polyamide dị ka naịlọn (Nylon) na naịlọn, na aha Bekee ya bụ Polyamide (PA);PA nwere ezigbo ihe zuru oke, gụnyere akụrụngwa akụrụngwa, nguzogide okpomọkụ, nguzogide abrasion, nguzogide kemịkalụ, mmanye onwe ya, na esemokwu dị ala, ụfọdụ retardan ọkụ.
Uru 4 nke Iji Eco-Friendly Akpa
Mmetọ ọcha bụ ajọ mmetọ gburugburu ebe obibi na mba anyị, a na-ahụkarị ihe mkpofu rọba a tụfuru n'ọtụtụ ebe ọha.E liri n'ala ga-emetọ mmiri dị n'ime ala ma na-emepụta ikuku na-emerụ ahụ mgbe ọkụ.Ya mere, jiri akpa ndị na-emetụta gburugburu ebe obibi ma jiri obere plastik mee ihe ...
Ndị na-ebunye akpa Tote owu, Akpa owu, Ụlọ ọrụ akpa ịzụ ahịa,